Jananinepal.comलघुकथा : साइबर संवाद - Jananinepal.com
लघुकथा : साइबर संवाद
प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार
सुमुखी, तपाईं कति सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ छन्दमा! अझ वाचन कला त मनमाेहक । म तपाईंको फ्यान नै हुँ । मेरो प्रशंसाले सुमुखीकाे अनुहार चम्किलाे देखिन्छ । उनी मख्ख मात्र होइन गजक्क पर्दछिन् । अनि यसरी बाेल्छिन् – धन्यवाद , सबैले यस्तै भन्छन् । तपाईंले भनेजस्तै ।
तपाईंको गला शार्दूलविक्रीडित छन्दका कविता वाचनमा त झनै झङ्कारमय लाग्छ ! हृदयरञ्जक !! म पुनः तारिफ गर्छु ।
सुमुखी- हो र !, हुन त यसमा मैले विशेष वरदान नै पाएकी छु जस्तो लाग्छ । कतिपय वरिष्ठ कविजीहरूका रचना वाचन गर्ने सौभाग्य त्यसैले त पाएकी हुँ मैले । उहाँहरूलाई मेरै वाचनकलाले जुरुक्क माथि उठाएकाे छ ।
हो नि, मलाई थाहा छ ! म समर्थन जनाउँछु र जिज्ञासा पनि राख्छु- अनि, तपाईंले कुन कुन छन्दमा कलम चलाउनुभएकाे छ ?
सुमुखी- अँ, शार्दूल विक्रीडित, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, इन्द्रवज्रा, वसन्ततिलका, स्वागता, शालिनी यस्तैयस्तै छन्दमा ।
अाेहाे! यति धेरै छन्दकाे ज्ञान छ है तपाईंलाई ? कसरी जानेकी हँ ? मैले त सिक्न खाेजेँ, सक्दै सकिनँ । कस्तो अप्ठ्यारो हुँदाे रहेछ , म यसरी बाेल्छु ।
सुमुखी-लाग्नुपर्छ नि निरन्तर, सकिन्छ त । मलाई एकजना नेपाली गुरुले अलिकति सिकाउनुभएकाे थियोे, अाफ्नै मिहिनेतले जानेकी नि । अहिले त उहाँलाई नै सिकाउन सक्ने भइसकेँ ।
हो है,तपाईंको प्रतिभा नै उच्च काेटिकाे छ के । मलाई पनि छन्दमा लेख्न साह्रै मन छ, तपाईंको सहयोग चाहिन्छ है, म अाग्रह गर्छु ।
सुमुखी-ठिक छ, नियम सिक्नुस् कुनै गुरुसँग । म वाचन गर्न सिकाउँला नि ।
किन मैले अर्को गुरु खाेज्ने? मेरी गुरुमा तपाईं नै बन्नुपर्छ । अाजदेखि म तपाईंको फेसबुके साथी मात्रै होइन, छन्द कविताको शिष्य बन्न चाहन्छु । तपाईंले अस्वीकार गर्न पाउनुहुन्न । म जिद्दीकाे भाषा बाेल्छु ।
सुमुखी- हेहेहे, के भन्नुहुन्छ तपाईं पनि !
म हृदयदेखि बाेल्दै छु सुमुखी! मनको कुरा भनेको हुँ । मलाई अाजैदेखि कक्षा दिनुपर्छ तपाईंले । कमसेकम गण र मात्राबारे सजिलोसँग केही सिकाउनुस् अहिले नै । मैले यति भन्दा उनको अनुहारको चमकमा एक्कासि कमी देखिन्छ ।
सुमुखी-हेहेहे, तपाईं पनि कस्तो मान्छे समुद्र! तातै खाऊँ, जल्दै मरूँजस्ताे कुरा गर्नुहुन्छ । यसका लागि एकदुई दिन पर्खनुस् ।
एकदुई दिन भनेको के? तीनदिनपछि ? अँहँ, मलाई भाेलिदेखि तपाईंले भिडियोबाट नै क्लास लिनुपर्छ, बुझ्नुभयो । मेरो दबावमूलक भाषाले उनको अनुहारमा झनै विरूपता थपिन्छ । अाे के बाई, शुभरात्रि, यत्ति भन्दै भिडियो अफ गर्छिन् उनी।
अर्को दिन बिहानै सबैभन्दा पहिले उनलाई नै शुभ प्रभात भन्न मन लाग्छ । फेसबुकमा उनलाई खाेज्छु, अचम्म लाग्छ! मलाई त ब्लक पाे गरिसकिछन् उनले ।
के कुरा गर्छौ समुद्र तिमी ! अाफैले कहाँ लेखेकी हो र कविता सुमुखीले ? उसका नाममा राही, राग, विदेन, लबराम, विकपहरूले लेखिदिएका हुन् नि छन्दका सबै कविता । गद्यकविताका हिमायती युवाकवि समिनले दिउँसो चिया खाजा खाँदै गर्दा भएकाे मेसेन्जर गफमा भनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ सुमुखीले मलाई ब्लक गर्नुकाे कारण ।
काेराेनाकाे फरक गीत सार्वजनिक